उत्तरआधुनिकतावाद : जीवनविरोधी र अवैज्ञानिक सिद्धान्त | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
डा. धनप्रसाद सुवेदी ‘श्रमिक’
कात्तिक २१ गते, २०७२ - १३:५४
उत्तरआधुनिकतावाद सन् १९६० पछि विकसित भएको सिद्धान्त हो । जर्मन दार्शनिक नित्सेको ईश्वर मृत्युको घोषणाका पृष्ठभूमिमा जन्मिएको यो सिद्धान्त ज्याक डेरिडाको भ्रम, भिन्नता र विखण्डनको सिद्धान्त, ल्योटार्डको महाख्यानको अन्त्यको घोषणा, रोलाँ बार्थको लेखकको मृत्युको घोषणा, फुकियामाको इतिहासको अन्त्यको घोषणा, मिसेल फुकोको ज्ञानको पुराशास्त्रको सिद्धान्त लगायतका मत र मान्यतामा टेकेर बनेको खिचडी वा क्वाँटी सिद्धान्त हो । यसले सन् १९७० दसकयता जन्मिएका विभिन्न सिद्धान्तलाई आफूमा समाविष्ट गरेको दाबी गर्दछ । विनिर्माणवाद, नारीवाद, डायोस्पोरिक साहित्य, अभिघातवाद, पर्यावरणीय साहित्य, उत्तर औपनिवेशिक साहित्य, जनजातीय सिद्धान्त, परोक्ष यथार्थ (भर्चुअल रियालिटी), अतियथार्थ, मायिक यथार्थ, सांस्कृतिक समालोचना जस्ता विविध सिद्धान्तहरूलाई उत्तरआधुनिकतावादभित्र गोलमटोल गरिएको पनि पाइन्छ ।
उत्तरआधुनिकतावादले साहित्यका सबै पूर्व स्थापित मान्यताहरूको मृत्युको घोषणा गरेको छ । त्यति मात्र होइन यसले साहित्यकै मृत्युको घोषणा गर्दछ । यसक्रममा महाख्यानको मृत्यु, लेखकको मृत्यु, पाठकको मृत्यु हुँदै विधाको मृत्युको वकालत गर्दछ । यसले साहित्यमा विधामिश्रण, विधा भञ्जन र अन्तरविधात्मकताको चर्चा गरिन्छ । यसले पाठभन्दा बाहिर रहेका लेखक, समाज आदिको सन्दर्भलाई अस्वीकार गर्दछ । यसले नायकत्वको अस्वीकार गर्दछ । यो साइबर संस्कृतिलाई प्रश्रय दिने सिद्धान्त हो । यसबाट भाषाका प्रचलित नियम, अनुशासन, पूर्व प्रचलित बिम्ब–प्रतीक, मिथक, व्याकरण, अर्थ आदिलाई अस्वीकार गर्दै प्रविधिका लागि सजिलो हुने भाषाको प्रयोगमा जोड दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।
उत्तरआधुनिकतावादले साहित्यका सबै पूर्व स्थापित मान्यताहरूको मृत्युको घोषणा गरेको छ । त्यति मात्र होइन यसले साहित्यकै मृत्युको घोषणा गर्दछ । यसक्रममा महाख्यानको मृत्यु, लेखकको मृत्यु, पाठकको मृत्यु हुँदै विधाको मृत्युको वकालत गर्दछ ।
संसार सत्य र तथ्यमा होइन भ्रममा अडिएको छ भन्ने उत्तरआधुनिकतावादको सार हो । दुनियाँमा प्रगति, सङ्घर्ष, मुक्ति सम्भव छैन, जे छ त्यसैमा सन्तोष मान भन्ने यस सिद्धान्तको सन्देश हो । यही सन्देश फैलाएर शोषण–उत्पीडनविरुद्ध हुने एकीकृत तथा वर्गीय सङ्घर्षलाई निस्तेज पार्ने र पुँजीवादलाई बलियो बनाउने विचार नै उत्तरआधुनिकतावाद हो । महिला, जनजाति, दलित, सीमान्तकृतका कुरा उठाइदिएर उनीहरूको पक्षधर भएजस्तो देखिने तर सङ्घर्ष, मुक्ति, एकता असम्भव छ । त्यसैले जे छ त्यसैमा सन्तोष मान भनेर अर्ति दिने काम उत्तरआधुनिकतावादले गर्दछ । केन्द्र भत्काइको कुरा गर्ने तर भूमण्डलीकरण, उपभोक्तावाद अनि साइबर संस्कृतिको केन्द्रका बारेमा भने चुँ पनि नबोल्ने बरु तिनैलाई प्रश्रय दिँदै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको व्यापारलाई निर्वाधरुपमा विश्वभर फैलाउने योजनासाथ जन्मिएको पुँजीवादी हतियारको नाम नै उत्तरआधुनिकतावाद हो ।
उत्तरआधुनिकतावाद आधुनिकताविरुद्ध जन्मिएको सिद्धान्त हुनाले यसका मान्यताहरू आधुनिकताविरोधी र विपरीत प्रकारका छन् । यो अराजकता, अनुशासनहीनता, विखण्डनकारिता तथा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्रश्रय दिने सिद्धान्त हो । यो समानता, भातृत्व, सामूहिकता, अनुशासन, सङ्घर्ष, परिवर्तन र मुक्तिको विपक्षमा छ । यसले पुराना केन्द्रको भत्काइको कुरा गर्छ, नवकेन्द्र र बहुकेन्द्रको स्थापनाको वकालत गर्दछ । तर केन्द्रहरु भत्किरहने र खाली ससाना केन्द्र मात्र बन्नुपर्ने भन्ने कुरा गलत छ । संसारमा हरेक कुराको निश्चित केन्द्र हुने गर्दछ । हामीलाई थाहा छ, उपग्रहहरूको केन्द्रमा ग्रह हुन्छ र ग्रहहरूको केन्द्रमा सूर्य रहन्छ । यदि यो केन्द्रको अन्त्य हुने हो भने प्रलय हुन्छ, संसार ध्वस्त हुन्छ । मानिसको रक्त सञ्चारको केन्द्र मुटु हो, मुटु भत्किनासाथ मानिसको मृत्यु हुन्छ । निश्चिय नै पुरानो, थोत्रो र काम नलाग्ने भएपछि हरेक कुरा भत्किन्छन् अनि बहुसंख्यक मानिसहरूको अहित गर्ने केन्द्रहरू भत्काउनु पनि पर्छ । तर उत्तरआधुनिकतावादीहरूले बहुसंख्यक र आम श्रमजीवी मानिसको हित गर्ने समाजवादी राज्य व्यवस्थालाई भत्काउने कुरा गरेका छन् । महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, काला जाति सबै उत्पीडितहरूलाई एकीकृत गरेर सबै खाले उत्पीडनविरुद्ध संयुक्त प्रकारको सङ्घर्ष गर्ने संसारभरका उत्पीडितहरुको केन्द्र माक्र्सवादलाई भत्काउने कुरा आफैमा उत्पीडकको हितको कुरा हो, शोषक वर्गको पक्षधरता हो । संसारभर शोषणको जालो फैलाएका बहुराष्ट्रिय कम्पनी र साइबर नेटवर्किङ जस्ता पुँजीवादी केन्द्रको भत्काइको कुरा नगर्ने तर उत्पीडितहरुको मुक्तिको केन्द्रका रुपमा रहेको माक्र्सवाद र समाजवादको भत्काइको कुरा गर्ने उत्तरआधुनिकतावाद पुँजीवादी स्वार्थअनुरुप बनेको सिद्धान्त हो ।
एकातिर बहुलताको कुरा गर्ने अर्कातिर युरोपेली–अङ्ग्रेजी ढाँचाको एकल विचार, एकल संस्कृति, एकल भाषा, एउटै प्रकारको राज्य व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने काम उत्तरआधुनिकतावादले गर्दछ । जनताको मुक्तिको कुरा र समानताको कुरालाई निषेध गर्ने अनि जे छ त्यसैमा सन्तोष मानेर बस, त्यो भन्दा दायाँबायाँ गरेर केही फाइदा छैन भनेर मानिसलाई निरीह, विवश, प्रविधिको दास र उपभोग्य वस्तुसरह बनाउने काम उत्तरआधुनिकताले गरेको छ । यसले पुँजीवादको विकल्प छैन, पुँजीवादका सबै प्रकारका शोषणलाई सहेर बस्नुको विकल्प छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ ।
उत्तरआधुनिकतावादले नारीका कुरा गर्छ, काला जाति, दलित, जनजाति र किनारामा परेका (सबाल्टर्न) लाई तिमीहरू पनि तिम्रा कुरा राख भन्छ तर तिनीहरूको वास्तविक मुक्तिको विषयलाई भने अल्मल्याइदिन्छ । उत्तरआधुनिकवादले नारीको सत्रु पुरुष हो भनेर व्याख्या गर्छ र पुरुषविरुद्ध सङ्घर्षको कुरा गर्छ । त्यसै गरी जनजाति, दलित र सबाल्टर्नका कुरामा पनि उत्तरआधुनिकतावादीहरू भ्रम छर्न मात्र सिपालु छन् । माक्र्सवादले जोड दिने गरेको श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको कुरा उत्तरआधुनिकतावादीहरूले उठाउँदैनन् । जब वर्गीय मुक्तिको कुरा उठ्छ, तब पुँजीवाद सङ्कटमा पर्दछ । त्यसैले पुँजीवादीहरू वर्गीय आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन जातीय नारा, लैङ्गिक उत्पीडन विरोधको नारा, सीमान्तकृतहरूको नारामा जोड दिन्छन् । माक्र्सवादले सबै प्रकारका उत्पीडनको अन्त्य चाहन्छ र त्यसका लागि सबै प्रकारका उत्पीडितहरू वर्गीय उत्पीडनको छाताभित्र समेटेर सबै प्रकारका शोषण–उत्पीडनविरुद्ध एकीकृत सङ्घर्षको कुरा गर्दछ । उत्तरआधुनिकतावादले पीडितहरूको सङ्गठन र सङ्घर्षलाई निषेध गर्दछ । जब पीडितहरू एक ठाउँमा आउँदैनन्, उनीहरू उत्पीडनविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दैनन् भने कसरी उत्पीडनबाट मुक्ति सम्भव हुन्छ ? उत्पीडितहरू विभाजित भएर आ–आफ्ना डम्फु बजाउँदा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी जस्ता उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्रको अधिकार प्राप्ति हँुदैन । यसका लागि एकीकृत प्रकारको सङ्घर्ष आवश्यक हुन्छ । उत्तरआधुनिकवाद त्यस्ता एकीकृत प्रकारका आन्दोलनविरोधी छ । त्यसैले उत्तरआधुनिकतावादीहरूले महिला, दलित, जनजाति, उत्पीडित क्षेत्रको पक्ष लिन्छन् भन्ने कुरा भ्रम सिवाय केही होइन ।
विधा नै नहुने अर्थात् लेखनमा कुनै अनुशासन हुनु नपर्ने भन्दै अहिले भइरहेका कथा, कविता, नाटक, उपन्यास सबैको मृत्यु भइसकेको कुरा भने हावादारी कुरा हुन् ।
उत्तरआधुनिकताले अनुशासन र नियमको विरोध गर्छ । उत्तरआधुनिकतावादीले भने जस्तो संसार अनुशासनरहित, नियमरहीत छैन, संसार त अनुशासन र नियममा चलेको छ । यदि उनीहरूले भने जस्तो नियम, अनुशासन, व्यवस्था आदिको अन्त्य भएको भए उत्तरआधुनिकतावादीको जन्म भएको ५० वर्ष बितिसक्दा पनि उहिले उहिले जस्तै पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ, दिनपछि रात र रातपछि दिन आउँछ, मानिसको सन्तान मानिस नै जन्मिने गरेको छ । उत्तरआधुनिक साहित्यमा कविता, कथा, नाटक आदि विधाको मृत्युको घोषणा गरिएको छ, विधा मिश्रणको वकालत गरिएको छ । संसारमा हरेक कुरा परिवर्तनशील छन्, संसारमा जन्म र मृत्यु स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । यसर्थ साहित्यका विधाहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्, पुराना विधा मर्छन्, नयाँ विधा जन्मिन्छन् । यो स्वाभाविक हो, तर विधा नै नहुने अर्थात् लेखनमा कुनै अनुशासन हुनु नपर्ने भन्दै अहिले भइरहेका कथा, कविता, नाटक, उपन्यास सबैको मृत्यु भइसकेको कुरा भने हावादारी कुरा हुन् । उनीहरुले विधा मरिसक्यो भनेर घोषणा गरेपछिका ५० वर्षमा भइरहेको विधा सिद्धान्तमा टेकेर लाखौँ कथा, उपन्यास र नाटकहरू लेखिएका छन्, करोडांै कविता विधाका सिर्जना भएका छन् ।
उत्तरआधुनितावादीहरुबाट भइरहेका विधालाई केही भाँचभँुच गरी विकृत बनाउने बाहेक कुनै नौलौ काम भएको छैन, कुनै एउटा नयाँ विधा जन्माउन सकेका छैनन् । उनीहरुले विनिर्माणका नाममा कतिपय कृति रचनालाई विकृत बनाएर प्रस्तुत गरे । त्यसले तर मूल कृति वा रचनाको लोकप्रियतालाई घटाउनुका सट्टा बढाइ दिएको छ । नेपाली साहित्यमा इन्द्रबहादुर राईले गुरुप्रसाद मैनालीको परालको आगो कथालाई तोडमोड गरेर कठपुतलीको मन कथा बनाए । यसले परालको आगो कथाको लोकप्रियतामा कुनै कमी ल्याउन सकेन । नेपाली गीतसङ्गीतमा विनिर्माण र विधा मिश्रणका धेरै प्रयोग भएका छन् र जति विनिर्मित ती सबै एक प्रकारले ‘फ्लप’ भएका छन् । यस्तो विनिर्माणबाट मूल गीतसङ्गीतको मर्म र लोकप्रियतामा कुनै कमी आएको छैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, उत्तरआधुनिकतावादी साहित्य–कलाले सस्तो चर्चा र हल्ला जन्माउन सक्छ, सस्तो मनोरञ्जन दिन सक्छ तर त्यसले पाठकको अन्तर मनलाई प्रभाव पार्न सक्तैन ।
निचोडमा समाजवाद र साम्यवाद असफल छन् भन्ने भ्रम फैलाउने, पच्छिमा संस्कृतिको प्रभाव विस्तार गर्ने, भूमण्डलीकरण, उपभोक्तावाद जस्ता पच्छिमा पुँजीवादीका आधारहरूलाई मजबुत बनाउने, अंग्रेजी भाषाको प्रभुत्व कायम गर्ने, वर्गीय शोषणको कुरै नउठाउने, वर्गीय आन्दोलनलाई निषेध गर्न महिला, दलित, जनजाति, काला जाति, आप्रवासी (डायोस्पोरा), सीमान्तकृत (सबाल्टर्न) आदिको पक्षधर भएको भ्रम फैलाएर उनीहरूको समर्थन लिने तर यस्ता हरेक उत्पीडितहरूलाई अलग अलग रूपमा विभक्त गरी पीडितहरूको सङ्घर्षलाई टुक््रयाएर अन्ततः संसारभर पच्छिमा प्रभाव फैलाउने, पुँजीवादी शोषण र एकाधिकारलाई सदैव जीवित राख्ने सिद्धान्तको नाम नै उत्तर आधुनिकतावाद हो । महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृतहरूको नारा लगाएर अन्ततः तिनै शोषित, पीडित र आम श्रमजीवी वर्गको शोषण गर्ने पुँजीवादी हतियारको नाम नै उत्तरआधुनिकतावाद हो । उत्तरआधुनिकतावाद पश्चिमी ढाँचाको अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, संस्कृति र अन्ततः पुँजीवादी–साम्राज्यवादी नीतिको रक्षाका लागि जन्मिएको सिद्धान्त हो । यो जीवनविरोधी र अवैज्ञानिक छ ।
कात्तिक २१ गते, २०७२ - १३:५४ मा प्रकाशित